TOP NEWS: Muxuu ka dhiganyahay kulankii dhexmaray Danjire Keating iyo madaxweyne ku xigeenka Galmudug Xaashi Carabey? – Kismaayo24 News Agency
TOP NEWS: Muxuu ka dhiganyahay kulankii dhexmaray Danjire Keating iyo madaxweyne ku xigeenka Galmudug Xaashi Carabey?
by Tifaftiraha K24 8th March 2017 046
Madaxweyne ku-xigeenka Maamulka Galmudug ahna siihayaha xilka Madaxweynaha Galmudug Mudane Maxamed Xaashi Carabeey ayaa kulan la qatay Wakiilka gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya Danjire Michael Keating.
Kulankan oo ka dhacay xarunta xalane ayaa labada mas’uul waxa ay uga wada hadleen arrimaha Abaaraha ba’an ee ka jira Deegaannada Galmudug iyo sida loogu gurman karo dadka ay abaaruhu saameeyeen.
Mudane Maxamed Xaashi Carabeey ayaa si qoto dheer uga warramay Xaaladaha adag ee ka jirta Deegaannada iyo Degmooyinka Dowlad Goboleedka Galmudug, isagoo xusay inay ka sii darayso xaaladda abareed ee ka jirta Galmudug.
Wakiilka Qaramada Midoobay ee Soomaaliya Michael Keating ayaa shegay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay hay’adaha samafalka uga howlgeli doonana deegaannada Maamulka Galmudug si loogu gurmado dadka ay abaaruhu saameeyeen.
Daawo: Ra’isul wasaare kheyre oo maanta ku dhawaaqay arin muhiim ah oo mudo la hadal haayay
War cusub: Uhuru kenyatta iyo donald trump oo khadka taleefanka uga wada hadlay arin aan caadi aheyn oo soomaliya ku saabsan